Ankoatra Ny Fanavaozana, Mila Fikambanam-Piarahamonina Itokisana Ny Fanaovan-Gazety · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 24 Desambra 2016 4:09 GMT
Vakio amin'ny teny Türkçe, Español, русский, English
SARY: Sehatra ho an'ny daholobe avy amin'ny Pixabay.
Nahazo vaovao tsy nampoizina aho herinandro vitsivitsy lasa izay, fa nahazo ny loka Shuttleworth Flash Grant izay iray amin'ireo fanohanana ara-bola kely atolotry ny Orina Mpanasoa Shuttleworth ho an'ny olona voafidy nanao fanovana ara-tsosialy tsy nisy faneriterena, mba ho fanohanana ny asany.” Nomena ho an'ireo olona notendren'ireo namana misy izany ary tsy misy ny fepetra na faneriterena miaraka aminy.
Faly aho nahazo izany, ary mazava ho azy nahatonga ahy hanontany hoe: Inona no zavatra tena ilaina hampiasàna ilay vola?
Nijery ny tranonkalan'izy ireo aho hahazoana aingam-panahy, ary nahita izao tao amin'ny fandaharana vatsy ho an'ny sakaiza :
Ho fanampiana anay ho tonga any, mila mamantatra ireo olona mahatalanjona manana hevi-baovao izahay ary manome azy ireo vatsy fanohanana ara-bola, sy mampitombo avo folo heny na mihoatra ny vola izay ampiasainy amin'ny tetikasany manokana .
Toy izao izany ny fandehany: Mino aho fa tsy hevi-baovao fotsiny ihany no ilaintsika na tetikasa manova izao tontolo izao. Fa mila fitokisana, fikambanam-piarahamonina, ary fahaiza-manao ihany koa isika. Mila manamafy orina sy manohana ny foto-drafitrasa sy ny vondrom-piarahamonina efa misy isika. Manahy aho fa mirona haingana be loatra mankany amin'ny fanavaozana sy ny fanapahan-javatra isika, ary mihevitra ireo zava-dehibe—dia ireo zavatra anankinantsika [ny fanovana]—ho efa azo avy hatrany, tsy tahaka izay ataontsika amin'ny “hevi-baovao” izay andaniana fotoana sy ezaka maro ny fananganana azy.
“Fikambanam-Piarahamonina no itokisako ho fon'ny fiovana mitoetra maharitra, fa tsy olona tsirairay, “
Milaza amin'ny antsipiriany ny fomba nahatonga antsika hanome lanja ny fanavaozana manoloana ny fikojakojana ity lahatsoratra andrana tao amin'ny Aeon ity, saingy milaza fa misy lanjany eo amin'ny seha-piainana maro ny fikojakojana, ny fanamboarana ary ny foto-drafitrasa. Miombon-kevitra amin'ireo teboka maro ao amin'ny lahatsoratra aho, ary fantatro ihany koa fa vitsy lavitra loatra ny rafitra famatsiam-bola ho an'ny fikambanana na fikambanam-piarahamonina miatrika ireo olana ireo.
Ao anaty tontolon'ny tsy mpitady tombontsoa, maro ireo hetsika manohana ny fanavaozana, toy ny Vatsy Famatsiam-bola ny fanavaozana avy amin'ny UNICEF, ny Global Innovation Fund, ary ny Famatsiam-bola fanavaozana avy amin'ny Knight. Nefa afa-mieritreritra ireo tena vitsy manohana ara-bola ny fikojakojana—na ny fikojakojana ny fantson-drano na etona, araka ny voalazan'ny lahatsoratra ao amin'ny Aeon momba izany aho.
Izany rehetra izany ao an-tsaina, sy ny fahalalana fa maro ny fikambanana sy ny fikambanam-piarahamonina fantatro sy hajaiko no miasa amin'ny loharanom-bola voafetra tsy araka ny anampoizana azy, dia nanapa-kevitra ny hanome ny ampahany amin'ny anjara vatsy azoko aho.
Fikambanana roa no nirotsahako hananganana fitokisana sy natao ianteheran'ny hafa —sady ahiako ho heverina ho efa ao am-paosy avy hatrany. Fantatro ihany koa, fa tsy dia manintona noho ireo fikambanana sasany izay mifantoka amin'ny “fanavaozana” ny ‘fivoarany’, kanefa mino tanteraka aho fa lehibe lavitra ny zavatra atolotr'izy ireo.
“Mila fotoana maharitra ny fanorenana fikambanam-piarahamonina, foto-drafitrasa ary fitokisana, nefa raha tsy misy ny fanohanana, mety hanjavona vetivety ireo fisasarana rehetra ireo.”
Ny Human Rights Data Analysis Group ny iray amin'izy ireo, fikambanana iray ” mampihatra ireo siansa tsara kajy amin'ny fandalinana ny fanitsakitsahana ny zon'olombelona manerana izao tontolo izao.”
Global Voices ny iray hafa. Manome tati-baovao mendri-pitokisana avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao i Global Voices fara faharatsiny tao Etazonia nandritra ny fotoana rehefa nipaka tany ambany indrindra hatramin'izay nisiany ny fitokisana ny fampitam-baovao. Fikambanana fampitam-baovao maro no mifantoka amin'ny “firotsahana an-tsehatry ny mpihaino” sy ny “firotsahana an-tsehatry ny fikambanam-piarahamonina”, kanefa ny vondrom-piarahamonina Global Voices irery ihany no hitako manao izany amin'ny fomba tena manan-danja.
Amin'ny fanampiany sy ny fanohanany, olona maherin'ny 1.400 avy amin'ireo mpihaino ireo no mpanoratra, mpandika teny sy mpanitsy lahatsoratra. Ny mpanoratra milatsaka an-tsitrapo (anisan'izany ny tenako !) no mirotsaka manoratra ny zava-misy mitranga aminy amin'ny fomba marina sy mahasoa, voaranitry ny fahalalàny ny zava-misy eny ifotony sy ny fomba fijeriny manokana. Manana ny fikambanam-piarahamonina azy manokana ihany koa izy rehetra ireo—fa lasa fikambanam-piarahamonina tena matanjaka sy mahatoky amin'ireo tantara izay kely loatra ny tati-baovao momba izay mitranga.
Voamarika ihany koa ny fimaroan'ny karazan-tantara taterina, sy ny fomba fitantarana izany. Amin'ny maha-fikambanana tsy mitady tombontsoa azy dia tsy manoratra itadiavam-mpitendrena dokambarotra ry ireo. Manoratra izy ireo hizara tantara avy amin'ny zava-misy any an-toerana hanampy ny hafa hahafantatra ampaham-paritra eto amin'izao tontolo izao izay heverina ho tena lavitra indraindray. Izany karazam-pahalalàna sy fanaovana izay hahatakarana ny zavamisy izany no tena ilaintsika amin'izao fotoana izao…. Mila fotoana maharitra ny fanorenana fikambanam-piarahamonina, foto-drafitrasa ary fitokisana, nefa raha tsy misy ny fanohanana, mety hanjavona vetivety ireo fisasarana rehetra ireo..
Raha lazaina, tsy betsaka ny fanomezana nataoko. Saingy tiako ny mandrisika ny hafa—indrindra ireo izay miantehitra amin'ny vondrom-piarahamonina sy fikambanana tahaka ireo roa etsy ambony—mba hieritreretana izay mendrika ny fanohanantsika, nefa heverintsika fa tsy mila itolomana intsony.
Mila fotoana maharitra ny fanorenana fikambanam-piarahamonina foto-drafitrasa ary fitokisana, nefa raha tsy misy ny fanohanana, mety hanjavona vetivety ireo fisasarana rehetra ireo.